Oduu Ammee! Hooggantoonni ABO kanneen akka Kol. Gammachuu, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee! Hooggantoonni ABO kanneen akka Kol. Gammachuu,
Hooggantoonni ABO kanneen akka Kol. Gammachuu, J. Battee Urgeessaa J. Lammii Beenyaa, J. Daawwit Abdataa,
Dr. Gadaa Oljirraafi JGadaa Gabbisaa J. Waaqoo Noolee, J.Ibsaa Gaaddisaa fa’a kan yeroo darbe mooraa leenjii waraana Awaash Malkaa dhufa guyyoota mursaa duraan kan fidaman waajjira Poolisiin Magaalaa Galaan irraa ganama kana baafamaniiru. Eessa akka geeffaman hubaachun hin dandeenye jedhu maatiin deemes arguu hin dandeenye. Honggantoota keenya hordofachuun dirqama keenya. Cabaan harka rarraafate badaan nama galfaata jabaa keenya egaachu qabna.
Lammii Gammachuu irraa.
Hogganoonniifi miseensonni ABO mana hidhaa magaalaa Galaan turan mana hidhaa keessaa baafamanii eessa akka geeffaman walaalamuu maatiin hidhamtootaa himan.
[SQ Adoolessa 29/2021]
Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa booda qabamanii mana hidhaa adda addaa keessatti hidhamaa kan turan hogganoonniifi miseensonni ABO mana hidhaa magaalaa Galaan keessaa har’a ganama baafamanii eessa akka geeffaman hin beekamiin jiraachuu maatiin himan.
Amma dura mooraa leenjii Awaash Malkaasa’aa geeffamuudhaan erga achi turanii booda torban darbe keessa gara mana hidhaa Galaan geeffamanii haga har’aatti achi turaniiru. Hooggantoonniifi miseensonni ABO mana hidhaa Galaan geessaa baafamanii achi buuteen dhabame kun kanneen akka Kol. Gammachuu Ayyaanaa, obbo Battee Urgeessaa, Lammii Beenyaa, Daawwit Abdataa, Dr. Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Waaqoo Noolee fi Ibsaa Gaaddisaa fa’a yommuu ta’an yeroo adda addaatti qabamanii manneen hidhaa garagaraa keessatti hidhamaa kan turanidha.
Hoggantoonniifi miseensonni ABO kunniin erga hidhamanii mana murtiitti dhiyaatanii yeroo adda addaatti manni murtii bilisaan akka gadhiifaman ajajee kan tureefi poolisiin ajaja mana murtii hojiirra oolchuu dhabuun kan mana hidhaa turse ta’uu yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Lammii Beenyaa fi Daawwit Abdataa manni murtii waliigala Oromiyaa erga akka gadhiifaman ajajee booda abbaan alangaa Federaalaa ol iyyannoo fudhatus manni murtii federaalaas murtiin mana murtii waliigala Oromiyaa akka kabajamu murteessuudhaan akka gadhiifaman ajajee ture.
Koloneel Gammachuu Ayyaanaas manni murtii Oromiyaa erga gadhiisee booda gara mana hidhaa Qilinxootti dabarfamee manni murtii federaalaa dhaddacha Lidetaa akka gadhiifamu ajajus poolisiin balbala mana hidhaa Qilinxoo irraa qabuudhaan mana hidhaa birootti dabarsuu gabaasnee turre.
Akkasumas, Dr Gadaa Oljirraa, Gadaa gabbisaa, Waaqoo Nooleefi Ibsaa Gaaddisaa manni murtii magaalaa Buraayuu “dhimmi keessan nuun hin ilaallatu” jechuudhaan galmee isaanii cufanii turan.
Amma mana hidhaa Galaan keessaa baafamuun isaanii maatiif yaaddoo guddaa akka ta’e maatiin hidhamtoota kanneenii ibsaniiru.
ODUU AMMEE: HD ABO Poolisiin fedeeraalaa to'atee
ODUU AMMEE: HD ABO Poolisiin fedeeraalaa to'atee. MOORAA GULLALLEE Ganama waraanni mooraa guutee, eegdota mooraa,…
Oduu Ammee: Walga’ii I/H/D ABO dhaan waamame irraa kan qooda fudhatan MGS ABO J/ Hundee…